Guddoomiyaha Maxkamada sare ee Jamhuuriyada Somaliland oo la kulmay MP Kerry McCarty iyo Jaaliyada Somaliland ee Bristol |
Guddoomiyaha Maxkamada sare ee Jamhuuriyada Somaliland oo la kulmay MP Kerry McCarty iyo Jaaliyada Somaliland ee Bristol
Bristol (Gabiley.net) Waxa booqasho qaadatay laba maalmood ku yimi magaalada Bristol guddoomiyaha Maxkamada Sare ee Somaliland Mudane Yuusuf Xaaji Cali iyo xubin ka mid ah la taliyayaasha dhinaca sharciga ee Maxkamadda Sare.
Booqashadan oo la xidhiidhay booqasho shaqo oo uu guddoomiyuhu ugu yimi wadanka Ingiriiska khaasatan magaalada London.
Haddaba mudadii uu joogay guddoomiyuhu wuxuu kulamo la yeeshay xildhibaanad Baarlamaanka lagana soo doorto bariga magaalada Bristol oo ah MP Kerry McCarty oo ka mid ah xubnaha u ololeeya Ictiraaf raadinta Jamhuuriyadda Somaliland ay soo doortaan guud ahaan dadka ka soo jeeda Somaliland oo uu u badan xaafada laga soo doorto iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Somaliland.
Kulanka Guddoomiyaha iyo MP Kerry oo qaatay saacad waxa lagaga wada hadlay sii xoojinta iyo derder galinta iyo waliba sidii loogu mahad niqi lahaa Kerry iyo xildhibaanada Labour-ka ah ee aadka ugu ololeeya qadiyada Somaliland.
Sidoo kale Guddoomiyuhu wuxuu guddoonsiiyey Kerry buug shaqada ee Maxkamada sare, kaas oo ay aad ugu faraxday, waxa kale oo ay sheegtay Kerry in aad ugu faraxday inay la kulanto Guddoomiyaha Maxkamada Sare ee Somaliland Mudane Aadan X Cali, waxa kale oo ay sheegtay inay wakhti hore ugu danbsay Somaliland oo ay dhawr jeer tagtay Magaalada Hargeysa wakhtigii dawladii hore ee Daahir Rayaale Kaahin oo ay ku han weyn tahay in mar kale ay booqato Somaliland.
Intaa ka dib waxa Guddoomiyuhu xog waran siiyey qaybo ka mid ah bulshada Somaliland wakhtiga joogitaankiisa oo aad yaraa darteed, waxaanu afeef ka dhigtay in sida siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadka kale aanu isagu u iman magaaladan in la sooryeeyo waxna la siiyo, balse kaliya uu u yimi sidii uu u arki lahaa oo kaliya jaaliyada Somaliland ee degan Bristol.
Guddoomiyaha Aadan Xaaji Cali oo la hadlaya jaaliyadda Bristol
Guddoomiyuhu wuxuu sharxaad dheer ka bixiey shaqada Maxkamada sare ee adeegyada ay dadka siiyaan, taas oo uu aad ugu dheeraaday wax qabasashada Maxkamada Sare, waxase uu si gaar ah u xusay mushkilada ugu badan ee maxkamada sare soo gaadhaa inay u badan yihiin dhulka.
Waxa kale oo uu xusay inay sameeyeen Maxkamada Guurguurta oo halkii dadkii danyarta ahaa ee jilicsanaa ee maalin kasta intay ka soo kicitimaan Gobolka ay degan yihiin ay dhib ku ahayd inay Hargeysa yimaadaan oo kharash badan kaga baxo joogitaankooda magaalada Hargeysa, inay iyagu maxkamada sare ahaan guuraan oo tagaan kolba gobolka looga baahan yahay Maxkamada sare marka ay dhawr dacwadood is gaadhaan dhegaysiga dacwadahaasna ka bilaabaan meelihii dadkii daganaayeen oo ay aad u soo dhaweeyaan. Kaliya waxa maxkamada sare lagaga qataa wakhtiga maxkamadu guurto hal garsoore oo kaliya si uu u sii wado hawl maalmeedka maxkmadda.
Maxkamadan guurguurta oo badi aanay caalamku lahayn ayaa wadamo badan la soo xidhiidhaan sidii ay Somaliland arrintani ugu hirgashay oo tababaro ugu yimaadaan Hargeysa sidii ay faa’iido uga heli lahaayeen maxkamada guurguurta.
Jaaliyadii ka soo qayb gashay kulankii iyo cashadii
Xogwarankaa kooban ee Guddoomiyaha ayaa qaybihii kala duwanaa ee bulshadu waxay ku waydiiyeen su’aalo wixii khuseeya dhinaca sharciga su’aalahaas waxa ka mid ahaa “Qurba joogta waxa lagu dhibaa oo lagu qabsadaa dhulka, ka bacdina maxkamadaha ayaa la galiyaa, maxkamadihiina wakhtigooda dheeraada” Markaa maxaad wax uga qaban wayday qurba joogta wax lagu qabsado in wakhtiga loo fudaydiyo?
Su’aashaas mar uu ka jawaabayay wuxuu yidhi “Horta marka dacwad socoto waxa wada dooda Looyaro, looyar kastaana wuxuu eegtaa meesha uu qofka la dacwoonayaa ka jilicsan yahay markaa haddii qofkii qurba jooga ah la ogaaday in wakhtigiisu kooban yahay looyarkan kula dacwoonayaa jaani buu u helayaa halkaa aad ka jilicsan tahay, markaa waxaan kuu sheegayaa haddii aad qurbe joog tahay inaad wakhtiga marka hore ee aad galayso dacwad soo dheeraysato oo aanu looyarka kula doodayaa aanu arag daciifnimada wakhtiga ku haysta”.
Oday Caydiid oo ka mid ahaa dadkii su’aalaha waydiiyey wuxuu ku yidhi guddoomiyaha “Laba cisho ayaan ka sokeeyey wadankii, maxkamadaa sare iyada oo aanay waxba iga galin dacwadna iiga socon ayaan booqan jiray subaxii, dadkii dacwaduhu kaga jireen aad bay kuu amaanayeen sida wanaagsan ee aad ugu shaqaysay, balse arrinta aan ku waydiinayaa waxay tahay, dhammaan dhismayaashii dawladda waa la wada qurxiyey oo mashaariicbaa loo helay xafiiska kaliya ee busaarada iyo foolxumadu ka muuqatay wuxuu ahaa kaaga maxaa kuu diiday inaad qurxiso dhismahaaga haddii ay jirtay in la lunsaday kharashkii oo guddoomiyayaashii kaa horeeyey lunsadeen ma kula tahay inaad soo xidhxidho”.
Guddoomiyaha iyo dadkii meesha ka soo qayb galay aad bay ula dhaceen su’aashaas wuxuuna ku jawaabay “Horta adeer dhismaha Maxkmada sare waxa la dhisay wakhtigii Ingiriiska dalka xukumayay dadkuna waa inay taariikhda ururiyaan oo aanay iska dayicin dhismaha maxkamada sarena wuxuu ka mid yahay taariikhdaas, oo maanta waxaan kuu sheegaa in aan dhismahaa in la haghagaajiyo mooyee aan la dumin waayo taariikh dheer ayuu ka jooga. Waxa kale oo aan kuu sheegaa in qurxintii Insha Allaah dhawaan la bilaabayo oo aanu hagaajinayno”.
Intaa ka bacdi jaaliyada Somaliland ee Bristol ayaa waxa guddoomiyaha u sameeyeen casho sharaf.
Goor dhow naga filo iyadoo Muuqaal ah.